Ihe kacha mma 24 na-emepụta atụmatụ Idebe maka Ụmụ nwoke na Ụmụ nwanyị - Atụmatụ Echiche Tattoos
Ihe kachasị mma nke 24 na-echepụta echiche dị mma maka nwoke na nwanyị
Ọ bụrụ na ị na-eji ahụ gị mma, enwere ntụpọ n'ahụ gị nke ga-enye gị nhazi mara mma nke ịchọrọ. Mgbe ị na-egbu egbu afo dị ka nke a, onye ọ bụla na-ele gị anya mgbe ị nwere ihe yiri nke a.
1. Ihe omimi nke imechi omimi ime afo na ndi mmadu
2. Ogbugbu Tiger na akpa nwa
Mgbugbu na-egbu egbu maka ụmụ nwanyị dị oke ịtụnanya, ị na-ahụ onye na-abịa na-egbu egbu na-egbuke egbuke na #stomach na ị na-eche otú okike mmadụ dị. Ị naghị achọ igbu egbu a?
3. Nkịta ọhịa na-ewu ewu ma na-eche ihu igbu egbugbu echiche maka ụmụ nwoke
Ọkpụkpụ #tattoo a dị mfe karịa gị nwere ike iche na ọ bụ naanị ihe ole na ole ka a na-enweta ngwa ngwa site na ọtụtụ larịị. Ihe mbụ ị ga - eme bụ ịnweta ezigbo ndị ọhụụ ndị nwere ike inyere gị aka na ịbịaru ya. Ihe nke abuo bu uzo i choro inweta.
4. Okpokoro ihe omimi nke igbu ahihia umu nwoke
Mma afo igbu egbu bu ihe di n'etiti ndi kachasi mma. E nwere oge mgbe anyị chọrọ ịpụ na mpaghara nkasi obi anyị ma anyị na-eji tattoos dịka nke a.
5. Eche echiche igbu egbu afo ma nwee obi ụtọ maka umu nwanyi
Ị nwere ike ịchọta echiche gị na akwụkwọ tupu ịnye ya ogbugba na akpụkpọ gị. Ụbụrụ bụ otu n'ime akụkụ anụ ahụ na-egbuke egbuke karịsịa ma ọ bụrụ na ị nwere obi okike iji kpochapụ ihe okike gị niile n'ime otu.
6. Na-egbu egbu egbu egbu egbu echiche echiche
Ụmụ nwanyị ga-ahụ egbugbu a maka ụzọ o si ele anya. Ọtụtụ mgbe, anyị ahụla ọtụtụ ụmụ nwanyị na-eji egbu egbu a dị egwu nke ukwuu ịhụ.
7. Akpọrọ akpụ na-egbuke egbuke egbuke egbugbere ọnụ na afọ
9. Ntucha onu ogugu onu afo
Ụdị ọnyá afọ a bụ klas ụwa ma ọ bụghị onye ọ bụla nwere ike inweta ya. Mgbe ị na-agbalị ịnweta ịchịkwa gburugburu ebe obibi gị, akara #design bụ ihe ị na-agaghị enwe ike ime n'enweghị.
10. Ugo azu acha na-acha anụnụ anụnụ n'echiche nke dị n'akụkụ nke afo
11. Eke egbuke egbuke egbugbere anya na-egbuke egbuke maka ụmụ nwoke
Ọ dịghị onye na-ahụ ọnya afọ ma ọ gaghị achọ inye gị otuto maka iguzogide ihe dị mma na nkeiche. Ị nwere ike ịsị na egbu egbugbu a kachasị mma ma mara mma.
12. Echere na-egbuke egbuke na-egbuke egbuke n'akụkụ nke afo
13. Ihu iwe na-egbuke egbuke, egbugbu egbugbu echiche echiche dị mma maka ụmụ agbọghọ
Tụlee ihe ga-eme ka ị nweta egbu egbu dị ka nwanyị na onye ọ bụla chọrọ ka ị na-egosi ya mgbe niile, olee otú nke ahụ si eme ka ị na-eche? Mgbugbu na-egbu egbu na-abịa n'ụdị dị iche iche na nha. Mgbe ịchọrọ ịbanye, jiri ihe eji egbu egbu mee ka ị bụrụ ihe pụrụ iche.
14. Mkpụrụ obi ink ime mmụọ dị omimi nke dị mma maka ụmụ nwoke
15. Mmiri nke na-emenye ihere na-emepụta echiche maka ụmụ nwanyị
N'okwu a mgbe ị na-achọ ihe mgbu afọ, jiri obere oge chọpụta ma ọ bụrụ na ị bụ nwanyị ma nweta ihe omimi ime mmụọ dị egwu nke dị mma ma nwee ọtụtụ ihe ndị metụtara ya.
16. Akwara na akụkụ nke afọ zuru oke echiche maka ụmụ agbọghọ
17. Ntu ububa di nma na nwa mpi ozi egbugbu onu na nwa nwanyi
18. Eche egbu egbu n'obi n'akụkụ afo
Ọ bụrụ na ị bụ nwanyị nke na-achọ ihe dị mfe na dị jụụ, ọ kachasị mma ka ị gaa maka igbu egbugbu nke na-adịghị ele anya n'anya. Nchacha mara mma aghọwo ihe ndị inyom na-eji ejiji eme ihe na-eji ha eme ihe.
19. Cross and butterflyfly afo tattoo echiche maka ladies
Nnukwu igbu egbu afo aghọwo ihe nke i nwere ike ghara izere ma ọ bụrụ na ị na-eche echiche ịbanye na nke a.
20. Egbu egbugbu echiche iji kpuchie njiri
21. Ụdị afọ igbu egbugbu maka ụmụ agbọghọ
22. Ejiji egbu egbu na-eme n'akụkụ nke afo
23. Uche igbu egbu onu ogugu umu mmadu
24. Okpomoku na okooko osisi na-egbuke egbuke icho mma maka umuaka
Uche obina-egbu egbuegbu egbu egbuakpị akpịEgwu ugookpueze okpuezen'olu oluegbu egbu diamondenyi kacha mma enyiegwu egwuọdụm ọdụmegbugbu egbugbuegbu egbu ebighi ebindị mmụọ oziegbu egbu okpuegbu egbu hennaaka akaegbu egbu mmiridi na nwunyeazụ azụngwusi pusiọnwa tattooskoi ika tattoondị na-egbuke egbukeudara okooko osisiagbụrụ eboụkwụ akaarịlịka arịlịkazodiac akara akaraegbu egbuegbu egbu osisi lotusụmụnne mgbuegbu egbu maka ụmụ nwokeakara ntụpọegbugbu maka ụmụ agbọghọechiche egbugbuGeometric TattoosnnụnụAnkle TattoosỤdị ekpomkpaaka mma akaenyí egbu egbuakwara obiaka akamma tattoosmehndi imeweNtuba ntugharirip tattoosna-adọ aka mmaima ima mma